ကျောက်ကောင်တာများ | အိန္ဒိယကျောက် | လက်ကား | Flodeal Inc မှ
ကောင်တာများထိုကဲ့သို့သောစကျင်ကျောက်အဖြစ်ကသဘာဝကျောက်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးပေါင်းရာမှရရှိခဲ့ကြသည်, နှမျးဖတျကြောကျ, travertine, ထုံးကြောကျ, ရှဟံ. အထူးသ, ကျောက်ကောင်တာများသတင်းများအရလူအနေဖြင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအများစုတောင်းဆိုထားတဲ့ကောင်တာများဖြစ်ကြသည်. လူအတော်များများဟာကျောက်ကောင်တာများဆိုလိုခြင်းနှင့် စကျင်ကျောက်ကောင်တာများ သူတို့ရဲ့အိမ်တွေကြောင့်, အထိမ်းအမှတ, နှင့်အဆောက်အဦးများ. ဤရွေ့ကားကောင်တာများတဲ့တာရှည်ခံပစ္စည်းဥစ္စာများမှာ, အစွန်းအထင်းများနှင့်ခြစ်ရာမှကောင်းသောခုခံနှင့်အတူ. အဆိုပါကောင်တာများအိမ်၏အပြင်ပန်းနှင့်အတွင်းပိုင်းနှစ်ဦးစလုံးအလှဆင်အတွင်းကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍ, အဆောက်အဦးများ, နှင့်အထိမ်းအမှတ. အိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်နှင့်ကန်ထရိုက်တာတစ်အများစုသည်၎င်းတို့၏အိမ်များအဘို့ကျောက်ကိုသုံးပါနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကြောင့်, အပူရန်၎င်း၏ကြာရှည်ခံမှုနှငျ့ခှနျအား, ကုတ်ခြစ်ရာ, အစက်, နှင့်ယိုဖိတ်.
သဘာဝကျောက်ခဲနှင့်ပစ်အမျိုးမျိုးသောအရောင်ကြွလာ, ဒီဇိုင်းများ, နှင့်အမျိုးပေါင်းစားသုံးသူများ၏အရသာနှင့်တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်. အထူးသ, ကျောက်အမျိုးမျိုးသောအရောင်အဆင်းနဲ့ဒီဇိုင်းများအတွက်သဘာဝကျောက်ခဲတို့ကိုစင်ကြယ်သောအလှနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဖျောထုတျ. ထိုသူအပေါင်းတို့အိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်နှင့်ကန်ထရိုက်တာများလိုအပ်သောထူးချွန်ပစ္စည်းများမှာ. ကျောက်တဲ့တာရှည်ခံပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်ပါသည်ကတည်းက, အိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်နှင့်ကန်ထရိုက်တာများပိုကောင်းတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အဦးများအတွက်ကျောက်၌ထားရန်ပိုနှစ်သက်. ကျောက်ကောင်တာများအပူဖို့အလွန်အမင်းတစ်ခုခံပစ္စည်းများမှာ, စိုစွတ်ခြင်း, ကုတ်ခြစ်ရာ, အစက်, နှင့်ယိုဖိတ်. မဆိုယိုဖိတ်သို့မဟုတ်အစွန်းအထင်းကအလွယ်တကူရညျအသှေးသနျ့ရှငျးရေးအေးဂျင့်များနှင့်အတူဖယ်ရှားစေခြင်းငှါဖြစ်ပေါ်.
ကျောက်ကောင်တာများခြစ်တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဖယ်ရှားရေးနှင့်အတူနေအိမ်များမှနိစ္စထာဝရဂုဏ်အသရေကိုထည့်သွင်း. ကောင်တာများ၏ installation မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့်စနစ်တကျလုပ်သင့်ပါတယ်. installation အိမ်တော်ကိုပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်ဆောက်ခြင်းဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရှုထောင့်ဖြစ်ပါတယ်. ယနေ့ခေတ်, သဘောထားတွေပြောင်းလဲလူအများစုကသူတို့နေအိမ်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အဦးများအတွက်ကျောက်များနှင့်စကျင်ကျောက်ကောင်တာ၌ထားရန်ပိုနှစ်သက်ကြသည်. ကျောက်ကောင်တာများသို့မဟုတ်အုပ်ကြွပ်သို့မဟုတ်ပြားတစ်ခုခုကိုအဖြစ်အသုံးပြုသွားမည်စေခြင်းငှါ. ကျောက်နစ်မြုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်, မီးဖိုခန်း, နှင့်ရေချိုးကန်. ဤရွေ့ကားကောင်တာများအရောင်နှင့်အညီကွဲပြားခြားနားသည်, ပုံစံ, နှင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်. ကျောက်တချို့တခြားသဘာဝကျောက်များနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုအတူတက်လာကြောင်းသဘာဝကျောက်များကြားတွင်ဖြစ်ပါသည်.
အားလုံးသဘာဝအသောကျောက်ကောင်တာများတူညီနေကြသည်မဟုတ်ပေါင်းသူတို့ကြာရှည်ခံမှုနှင့်ခုခံပါဝါအတွက်ကွာခြား. ကျောက်အပူနှင့်ပေါင်းစပ်၏ပါဝင်သည်သောကြောင့်, ဒါကြောင့်အကြီးအကြာရှည်ခံမှုနှင့်ခုခံပါဝါအဖြစ်. ထိုကဲ့သို့သောအလှတရားထာဝရအဖြစ်မီးဖိုချောင်နှင့်ဗတ်အများကြီးပိုပြီးသက်သာခွင့်များအတွက်ကျောက်ကောင်တာများ Installing, ကြာရှည်ခံမှု, ဒါထွက်ခုခံနှင့်. ကျောက်ရဲ့အရည်အသွေးကျွမ်းကျင်သူမှတဆင့် install လုပ်ထားရပါမည်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့မဟုတ် installer ကို. ကြောင့်အိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်နှင့်လက်သမားတို့ကမီးဖိုချောင်နှင့်ရေချိုးခန်းမှကျောက်ရွေးချယ်ရာတွင်ကြောင့်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များရှိပါတယ်. ကျောက်အိမ်ရှင်များနှင့်တည်ဆောက်ရန်ထိရောက်နှင့်ထူးချွန်ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပေး. ကျောက်ကောင်တာပညာရှင်များသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သူများကအသိပညာနှုန်းအဖြစ်မီးဖိုချောင်နှင့်ရေချိုးခန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးကောင်တာများ၏ဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်.